सांस्कृतिक अधःपतन निरुत्साहनका लागि योगाभ्यास बढाऔँ : प्रधानमन्त्री जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको डेल्टा भेरियन्टको परिवर्तित रुप फेला ‘रहरमा कार्यक्रम ल्याइने गरेकाले बजेट कार्यान्वयन कमजोर’ डुवानमा परेका परिवारको बिचल्ली : छाक टार्न धाधौं राष्ट्रपतिद्वारा कोभिड–१९ नियन्त्रणमा भइरहेको कामबारे जानकारी कोरोना महामारीले लाखौँको तरकारी नष्ट चुरेमा बादल देखिनासाथ बस्तीमा त्रास कांग्रेस चितवनमा चुनावी चहलपहल शुरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता चोरी प्रकरणका दोषी उम्काउन खोजेको भन्दै वडा कार्यालय तालाबन्दी तारकेश्वरको आइसोलेसन केन्द्रलाई दुई थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग निर्जला एकादशी : घरघरमा तुलसीको दल राखिँदै योगभूमि नेपाल योग एवं तन्त्रसम्बद्ध ज्ञान–विज्ञानका अध्येताका लागि विश्वकै मूल गन्तव्य बन्न सक्छः राष्ट्रपति उपत्यकामा निषेधाज्ञा (लुज डाउन)थप खुकुलो : साना सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली आज मिति २०७८ साल असार ७ गते सोमबार, जुन २१, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?
नयाँ शेयर !
साधारण शेयर निष्कासनपछि संस्थाको चुक्ता पूँजी ५ करोड ५० लाख रुपैया पुग्ने
शुक्रबार, २१ पौष २०७४, सगरमाथा पोष्ट
काठमाडौँ, पुस २१ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था उन्नति माइक्रोफाइनान्सले शुक्रबारदेखि सर्व साधारणका लागि शेयर निष्कासन सुरु गरेको छ । अहिले कम्पनीले एक लाख ६५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरेको हो ।
कम्पनीको शेयर खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि छिटोमा २५ तथा ढिलोमा माघ ५ गते बन्द हुने बिक्रि प्रबन्धक कम्पनीले जनाएको छ । साधारण शेयरको आवेदन आश्वा सुविधा भएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिन सकिन्छ ।
साधारण शेयरको आवेदन दिँदा न्यूनतम १० कित्ता तथा अधिकतम ८ सय २० कित्ताको लागि दिन सकिने बिक्री प्रवन्धक कम्पनी सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ ।
संस्थाले प्रति साधारण शेयर एक सय रुपैयाँ दरका कुल एक लाख ५० हजार १ सय ५० कित्ता सर्वसाधारका लागि छुट्याएको छ । त्यस्तै, बाँकी ६६ सय कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ८ हजार २ सय ५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको बताएको छ । साधारण शेयर निष्कासनपछि संस्थाको चुक्ता पूँजी ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।